အလွယ်ကူဆုံး window ပေါ်မှ Partition ပိုင်းနည်း [Tips & Tricks] [Ebook]
Myanmar IT Resource Forum » HELP ZONE » » Hardware Problems » အလွယ်ကူဆုံး window ပေါ်မှ Partition ပိုင်းနည်း [Tips & Tricks] [Ebook]
1 အလွယ်ကူဆုံး window ပေါ်မှ Partition ပိုင်းနည်း [Tips & Tricks] [Ebook] on 28th October 2010, 1:09 pm
EASEUS Partition Master 6.1.1 နှင် Partition ပိုင်းနည်း
ကျတော် ဒီနေ့တော့ တခုလေးကို ရေးပေးပါ့မယ် အဲ့တာက လွယ်လည်းလွယ်တယ် မြန်လည်းမြန်တယ်
Window ပေါ်ကနေပဲ Partition ကိုပဲ ပိုင်းတာ မလို့ပြောပြတာပါအရင်က ဖိုရမ်မှာ Partition magic နဲ့ ပိုင်းတာကိုလည်းရေးပေးထားတာတွေဘူ့းပါတယ် ဒီထက်အဆင်ပြေမယ့်နည်းလိုက်ရှာကြည့်တော့ ဒီနည်းလေးကို သွားတွေ့တာနဲ့ကျတော် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်…ပီးတော့ ဒီစာအုပ်လေး ဖြစ်လာအောင် ကျတေ်ာ့ ကူညီခဲ့သူ ကိုထွန်းလင်းအောင်ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ် Partition magic နဲ့ ပိုင်းတဲ့ချိန်မှာ
ကျတော်တို့ Window7ေ့ပါ်ကဆို အခက်ခဲ့လေးတွေ ဖြစ်တာကိုတွေ့ရပါတယ် အဲ့တာကြောင့်ကျတော် ရှာဖွေရေးသားလိုက်တာပါ ….ပီးတော့ Freeware လေးလည်းဖြစ်လို့ကျတော်တော့ ပိုပီး ကြိုက်ပါတယ်
ကျတော်တို့ပြောနေတာကြာတယ် အောက်ကဖိုင်လေးကို စပီးဒေါင်းလိုက်ကြရအောင်ဗျာ..
ပီးရင်တော့ ပုံမှန်တိုင်းရမ်းပေးရပါတယ် Email နဲ့ နာမည့်တော့ ထည့်ပေးရပါတယ်…….
လေးကိုဒေါင်းပီးရင်ကျတော်တို့ အပေါ်မှာပြောထားတဲ့တိုင်းရမ်းပေးပါ အီးမေလ်းထည့်ပေးပါ
ကျတော် ရမ်းပီးရင် ဒီပုံလေးတိုင်းပေါ်လာမှာပါ………….
ကဲ့ ဒီနေရာမှာာကျတော်တို့ စလုပ်လို့ရပါပီ ဘာက ဘာလုပ်တယ်ဆိုတာကိုကို်ယ်ဘာသာ နည်းနည်းလေ့လာကြည့်
ကျတော့ ပြောတဲ့ Flow တိုင်းပဲ့လိုက်လုပ်ကြည့်ဖို့မပြောလိုပါဘူး နားလည်လွယ်အောင်လုပ်ပေးထားတဲ့
တွက် လုပ်ရကိုင်ရတာလွယ်ကူပါတယ် …ကိုယ်ဘာသာလည်းစမ်းသပ်ကြည့်နိင်ပါတယ် ကျတော်ပြောတာကိုပဲ
လိုက်လုပ်နေရင် ကျတော်ပြောသလောက်ပဲတက်မှာမလို့ စမ်းကြည့်ပါ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပဲ အဲ့တာမှ ပိုပီးသိမှာပါ
ကျတော်တို့ Window တင်ထားတဲ့ အပိုင်းထဲ့မှာ ၃၀ gb လောက်ပဲ ရှိတယ် အဲ့တာကို ကျတော်တို့ တပိုင်းထပ်ပိုင်းပြပါမယ် ( စက်အသစ်ဝယ်လာသူတွေ ဆိုရင် တပိုင်းတည်း သို့တည်းမဟုတ် ကျတော်တို့ System Recovery အပိုင်းပါ ပါတဲ့တွက် လည်းတခါတလေး ၂ ပိုင်းဖြစ်နေတက်ပါတယ် )
အဲ့တာဆိုရင်ကျတော်တို့ Window တင်ထားတဲ့အပိုင်လေးကို ထောက် Right click ထောက်ပီးရင် Resized /move ကိုရွေးပေးပါ ဒီလိုပုံလေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်
အကိုတို့ hardisk မှာပါသလောက်ရှာနေမှာ ပါ Partition size နေရာမှာပေါ့ အဲ့တာဆိုရင်ကျတော်တို့
(ဥပမာ..အဲ့ window တင်ထားတဲ့ အပိုင်းမှာ ၅၀၀ Gb ရှိတယ် ဆိုပါဆို မိမိ လိုသလောက်ကို ပဲ့ window တွက်ချန်ထားပီး ကျန်တာကို ပိုင်းလိုက်လို့ရပါပီ ၅၀၀ Gb ကို ၅၀ Gb ပဲထားပီး ကျန်တာကို ပိုင်းလိုက်လို ရအောင် ကျတော်လုပ်ပြပါ့မယ် လိုချင်သလောက်ကို ပိုင်းပီး ထားခဲ့နိင်တယ်နော်..) ခုကျတော်တို့ မျဉ်း ခရမ်းရောင်လေးနဲ့ ပြနေတဲ့ ညာဘက်စွန်းကို ထောက်ပီးလိုသလောက်ကို စွဲပီးပိုင်းနိင်သလို့ Partitio size က
နေလည်း လိုသလောက်ထားပီးပိုင်းနိင်ပါတယ်….လိုချင်သလောက်ထားပီးရင် ကျတော်တို့ OK ကို နိပ်လိုက်လို့ရပါပီ အဲ့တာဆို နောက် Partition တပိုင်းထပ်ပေါ်လာမှာပါ Ullocated partition ဆိုပီးတော့
အဲ့တာဆိုရင်ကျတော်တို့ Ullocated partition ကဒီလိုပုံလေးနဲ့ပါ
Ullocated partition ကို ပြန်ပီးတော့ Create လုပ်ပေးမှ သူက Partition တပိုင်းထပ်ရမှာပါ ကျတော်တို့ အဲ့တော့ Create ကိုနိပ်ပါမယ် အဲ့တာဆိုရင် Partition တပိုင်းအသစ်ရပါပီ အကိုအမ တို့က စက် အသစ် ဆိုရင် အဲ့အပိုင်းက ကြီးရင်ကြီးနေမှာပေါ့ နောက်ထပ်Partition ထပ်ပိုင်းချင်တယ် ဆိုရင် ကြီးနေတဲ့ အပိုင်းထည်းကနေပဲစက်ပီးပိုင်းပေါ့ လိုချင်သလောက်ကို ….ကျတော် ချဲ့ပီးမရေးတက်လို့ပါ
လိုရင်းပဲ ရေးပေးထားတာပါ အဲ့တာဆိုရင် Ullocated partition က နေ Partition ပိုင်း တပိုင်းအသစ်လေးကို ဒီလိုလေးေတွေ့ရပါပီနော် ပုံကိုကြည့်လိုက်ပါ
Apply ကို မနိပ်လိုက်ပါနဲ့ဦးမိမိ စိတ်ကြိုက်ဖြစ်ပီဆိုမှ ပဲ နိပ်ပေးပါ အဲ့တာဆိုရင်ကျတော် တို့ကို Restart ကိုတောင်းပါလိမ့်မယ်ပေးလိုက်ပါ မကြိုက်ဘူး ဆိုရင်လည်း Undo ကိုနိပ်ပီးလုပ်ပီးတာတွေ ကို ပြန်ဖျက်လိုက်လို့ရပါတယ် ..
ကျန်တာတွေ လည်းလုပ်လို့ရပါတယ် ကြီးနေတဲ့ အပိုင်းကနေ နည်းနေတဲ့ အပိုင်းကို ထပ်ပီးတော့ ပေါင်းပေးလို့ ရအောင်လည်း
လုပ်လို့ရပါတယ် အကိုအမတို့ဒီလောက်ဆို စက်ပီးတော့လုပ်လို့ရမယ်ထင်ပါတယ်အဲ့လောက်ထက်ပိုပီးလည်း
နောက်ထပ် ကျတော်တို့ Ubuntu တင်တဲ့ချိန်မှာ လိုချင်သလောက် Partition ပိုင်းတဲ့ချိန်မှာလည်း အသုံး ၀င်ပါတယ်3gb လောက်ကို Freespace ထားဘို့ ချိန်ရယ် partition ပိုင်းချင်သလောက်လေးပိုင်းဖိုလိုတဲ့ချိန်မှာ
အဆင်ပြေပါတယ် Logical နဲ့ Primary ကိုတော့ Create လုပ်ခါနီး ပိုင်းခါနီးမှာ ရွေးပေးပါ NTfs နဲ့ FAT တို့ကိုလည်း တူတူပါပဲ …..ဒီလောက်ဆို အားလုုံးအဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ်
ကျတော် ဒီစာအုပ်လေး ဖြစ်အောင်ပြုစုပျိုးထောင်ပေးခဲ့တဲ့ ဖေဖေနှင့် မေမေ အားလေးစားစွာကန်တော့လျှက်
ကျတော် ချစ်သူ နွေဥင်္ီးမွန် ကိုလည်း ကျေးဇူးတင်လျျှက် …..
အားလုံးကိုလည်း လေးစားလျှက် …………အစဉ်အမြဲ့ ကြိုးစားနေတဲ့ နေဦးသစ် …………..
ကျတော်ရေးသားထားတာတွေ ကို ဘယ်ဖိုရမ်ဘယ်နေရာမှာ ဖြစ်ဖြစ်တင်လို့ရပါတယ် ဒါပေ့မယ် အဲ့လိုတင်မယ်ဆိုရင်လည်းကျတော်တို့ ဖိုရမ်နာမည်လေးနဲ့ Credit လေးတော့ ပေးပေးပါလို့ တောင်းဆိုပါရစေဗျာ…….
ကျတော် အလွယ်ဖတ်လို့ရအောင် စာအုပ်ကိုပါ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်
2 Re: အလွယ်ကူဆုံး window ပေါ်မှ Partition ပိုင်းနည်း [Tips & Tricks] [Ebook] on 15th February 2011, 12:59 pm
3 Re: အလွယ်ကူဆုံး window ပေါ်မှ Partition ပိုင်းနည်း [Tips & Tricks] [Ebook] on 15th February 2011, 11:58 pm
ဒီလင့် ကနေဒေါင်းကြည့်နော် စာအုပ်ပါ ပါတယ်
အဆင်မပြေရင်ပြောပါ နောက် ဆိုက်တခုကနေတင်ပေးမယ်
4 Re: အလွယ်ကူဆုံး window ပေါ်မှ Partition ပိုင်းနည်း [Tips & Tricks] [Ebook]